Ma is fiirisay weligaa Ee Ma Ogaatay In aad Qurux Badan tahay? | Gaaloos.com
Home » galmada » Ma is fiirisay weligaa Ee Ma Ogaatay In aad Qurux Badan tahay?
Ma is fiirisay weligaa Ee Ma Ogaatay In aad Qurux Badan tahay?
Waad qurux badan tahay runtii waa kalmad aad u sahlan aadna ugu sahlan qofkastaa inuu dhaho. Waa kalmad marka aad maqasho aad dareemayso inaad tahay qof qiimo leh, quruxdu waxay noqon kartaa quruxda jidhka, nafta, guriga, akhlaaqda iwm.
Nooc ay noqotaba markaad maqasho waad quruxbadan tahay waxaa hubaala inay naftaadu la dhacayso kalmadaas, qof ku jecel oo dan kaalihi markuu kugu dhahana way kasii macaan badan tahay markaad ka maqasho qofkale.
Kawaran kalmadaasi hadii ay kasoo baxdo afkaaga oo aad naftaada ku dhahdo, maxaa kaa qurux badan, maxaa kaa wanaagsan, yaa kaa qiimo badan.
Ma ogatahay inaad qurux badan tahay oo cid kaa qurux badani ayna jirin, haa cidkaa qurux badan ma jirto hadii aad rumaysato adigu oo aad iska dhaadhiciso waxaan ahay qofka ugu quruxda badan ee aduunka jooga.
Waxaa laga yabaa inay buuxaan dad kaa cadcad oo kaa midab furan, yaase yidhi midabka madoobi ma quruxbadna, cid kaa midab quruxbadani ma jirto hadii aad aaminto taas.
Waxaa laga yaabaa inay jiraan dadkaa dheer oo dharerkooda lagu sheekaysto, yaa kaa dhaadhiciyey dheeridu waa qurux, saw ma ogid dadku inay wax ka sheegaan ka dheer iyo ka gaabanba, kawaran hadii aad dhererkaaga ku qanacdo oo aad iska dayso kabaha dhaadheer ee aan caafimaadkaaga u fiicnayn adoo dherer iska raadinaya.
Kawaran hadii aad lugahaaga si hoose ula hadasho iyadayna cidna maqlayn waa sir idinka dhaxaysa labadiina adiga iyo lugahaaga, kawaran marka aad kiriimka marinayso cagahaaga hadii aad si fiican u daawato quruxda Ilaahay siiyey cagahaaga, kawaran inta ay ku sidaan maalin kasta culayska jidhkaaga oo dhan iyagoon marna cabanayn, xataa markaad xanuunsato waa iyaga kuwa kusidaa, hadaba kaama istaahilaan miyaa inaad si hoose oo sira aad ugu sheegto quruxdooda iyo sidaad u jeceshahay, yaa kaa cago quruxbadan, qofkasta shan farood ama ka yar ayaa ku yaala, muu jiraa qof cagihiisu ay ka samaysan yihiin dheeman ama dahab, kawaran hadii aad dhererkaaga ku qanacdo oo aad cagahaaga quruxdooda u sheegto.
Qofkasta laba indhood, laba dhagood, af iyo san ayaa ku yaala wajigiisa, qof intaa kabadan wajigiisa ay ku yaalaan muujiraa, qof afar indhood leh maad aragtay, kawaran hadaba markasta oo aad muraayada isku daawato hadii aad wajigaaga si fiican u eegto, indhahaagani iyaga maaha miyaa kuwa aad wax ku aragto, inta aad aragto in kabadan cid aragtaa jirta miyaa, saw ma ogid inay jiraan kuwo aan nasiib u helin inay arkaan waxaad aragto ee nimco ah, saw ma ogid in indhahaagu ay yihiin muraayada ruuxdaada ama naftaada laga arki karo, saw ma ogid luqada cishqiga iyo jacaylku inay tahay luqada indhaha.
Dhagahaagu haday yaryar yihiin iyo haday waa wayn yihiinba saw ma ogid maqalkoodu inay isku mid yihiin, kawaran hadii aad isku daydo 2daqiiqo inaadan waxba maqlin, siday noloshu kuu dhadhami lahayd hadii aadan waxba maqlin.
Sankaagu isna ha dheraado ama hagaabnaado, ha waynaado ama ha dhuubnaado muxuu faa’iido kuugu fadhiyi lahaa hadii aadan waxba ku urun karin.
Afkaagu ha waynaado ama ha yaraado hadii aadan waxba ku dhadhaminayn ama aadan ku hadi karin siday noloshaadu noqon lahayd.
Intaas kadib ma sheegi kartaa cida kaa quruxbadan, kawaran markasta oo aad muraayada isku eegto hadii aad Allaah u mahadnaqdo ku siiyey intanoo nimco ah, inta aad ku mashquulsan tahay waan san waynahay ama waan indho yaryarahay ama waan fool xumahay oo cid i rabtaa ma jirto, kawaran hadii aad isku qanciso quruxda jidhku inayna ahayn sida uu u eegyahay kaliya ee shaqadiisuna ay ka muhiimsan tahay siduu u eegyahay.
Ka waran hadii aad aaminto oo aad ku qanacdo cidkaa quruxbadani inayna jirin.
Kawaran hadii aadan sugin intay cidi kugu odhan lahayd waad quruxbadan tahay, kawaran hadii aad adigu bilowdo inaad naftaada ku dhahdo yaa kaa quruxbadan.
Wali maadan dareemin miyaa inaad quruxbadan tahay
Title: Ma is fiirisay weligaa Ee Ma Ogaatay In aad Qurux Badan tahay?